नयाँ शक्तिमा कार्यविभाजन हेरफेर – Kantipurlink.com
Home > मुख्य समाचार > नयाँ शक्तिमा कार्यविभाजन हेरफेर
बिहिबार, कार्तिक ४, २०७३ kantipurlink.com
काठमाडौं, ३ कार्तिक । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको कार्यविभाजन हेरफेर भएको छ । आज बसेको विशेष राजनीतिक समितिले नया“ कार्यविभाजन गरेको हो । बैठकले प्रशान्त सिंहलाई संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले केन्द्रीय कार्यालयको संयोजकमा डा. केशवमान शाक्य र सह–संयोजकमा प्रह्लाद लामिछानेलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनको उत्प्रेरकको जिम्मेवारी राजु नेपाललाई दिइएको छ ।
प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएका सिंह हार्वड विश्वविद्यालय, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगायतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुबाट प्रशिक्षित हुन् । उनले यसअघि नै नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्देशक, विश्व बन्यजन्तु कोष, नेपालको निर्देशक लगायतका पदहरुमा रहेर कार्य गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यालय संयोजक शाक्य पूर्वमन्त्री (विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण) हुन भने उनले धेरै प्रतिष्ठित संस्थाहरुमा कार्यकारी पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय सह–संयोजक लामिछाने पूर्वसभासद् (प्रत्यक्ष निर्वाचित) हुन । त्यस्तै उनी नया“ शक्ति पार्टी, नेपालको मकवानपुर जिल्ला संयोजकको रुपमा काम गरिसेका छन् भने उनीस“ग विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव पनि छ ।
कार्ययोजना निर्माण कार्यदलहरु गठन
बैठकले मंसिर ५ गतेदेखि हुने केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकको निम्ति निम्नानुसारको कार्ययोजना कार्यदलहरु पनि गठन गरेको छः
क) वैचारिक–राजनीतिक तथा सा“स्कृतिक अभियान कार्ययोजना
संयोजकः डम्बर खतिवडा
सदस्यहरुः खिमलाल देवकोटा, करिष्मा मानन्धर, अमरध्वज लामा
ख) संगठन निर्माण तथा विस्तार कार्ययोजना
संयोजकः देवेन्द्र पौडेल
सदस्यहरुः केशव दाहाल, रामकुमार शर्मा, कल्पना धमला, पासाङ शेर्पा, कुमार पौडेल, देवराज भारद्वाज
ग) राष्ट्रिय तथा सामाजिक अभियान कार्ययोजना
संयोजकः गंगा श्रेष्ठ
सदस्यहरुः देवेन्द्र पराजुली, रामरिझन यादव, ऋषभदेव भट्टराई, लिली थापा, दुर्गा न्यौपाने, सावित्री लामा, दीपक भट्टराई
घ) आर्थिक स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना
संयोजकः रामेश्वर खनाल
सदस्यहरुः प्रशान्त सिंह, नवराज सुवेदी, सुनिल खड्का
ङ) उत्पादन तथा रोजगार÷स्वरोजगार कार्ययोजना
संयोजकः केशवमान शाक्य
सदस्यहरुः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जनकराज शाह, प्रदीपमान तुलाचन, प्रेम तामाङ
च) केन्द्रीय अनुगमन कार्यदल
संयोजकः वामदेव क्षेत्री
सदस्यहरुः सविना अर्याल, अशोक श्रेष्ठ, नाथुप्रसाद चौधरी
मुख्य समाचार समाचार nayasakti
Published On: October 21, 2016 at 7:41 am